घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू घानियन फुटबल खेलाडीहरू माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB पूर्ण स्टोरीको चेल्सी लीजेंन्ड प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "बिसन"। हाम्रो माइकल एस्सेन्सी बचपन स्टोरी प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुनेछ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै थोरै ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको तीव्र क्षमताहरूबारे चिन्ता छ तर केहीले हाम्रो माइकल एसेननको जैवलाई विचार गरे जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
माइकल कोजिओ एसेनए डिसेम्बर3को 1982rd मा अष्ट्रा मा जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, अबिया गोन्दो र बुबा जेम्स एसेनलाई जन्मिए। एसिअन गानामा गोमोआ न्यानाानो डीसी प्राथमिक र जेएसएसमा भाग लिइन्। तिनको बचपन दिनको दौडान उहाँ यो विनम्र र बुद्धिमानी स्कूल हुनुहुन्थ्यो।
केप कोस्टमा सेन्ट अगस्टिनको कलेजबाट स्नातक गरिसकेपछि तिनले फुटबल क्यामेरा सुरु गरे, लिबर्टी प्रोफेशनल नामक एक स्थानीय क्लबमा खेल्न थाले। एन्सेनले जब एक्सएनएक्सएक्स फीफा यू-एक्सएनक्स वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा न्यूजील्याण्डमा खेलेका थिए। युरोपेली स्काउट्सले नोटिस गर्न थालिन्, र एसेनले अप्रिलमा 2000 मा मैनचेस्टर युनाइटेडमा परीक्षण गरे। उनले डेबी काउन्टी क्लबको अन्तर्गत एनएनएनएमएक्स टोलीको पराजित गरे।
मैनचेस्टर युनाइटेडले उनलाई एक सम्झौता प्रस्ताव गरे, तर उनी यूनाइटेड किंगडममा कार्य अनुमति प्राप्त गर्न असक्षम थियो। त्यसकारण उनले बेला बेलायती फीडर क्लब रयल एन्टवर्पमा सहभागी नभएसम्म उनी इङ्गल्याण्डमा जाने योग्य थिए। तथापि, उनको आमाले यसको सट्टा फ्रान्सलाई एकचोटि मन परायो।
फ्रान्समा पाँच वर्षको स्टन्ट पछि, एसेननले फ्रांसीसी नागरिकता हासिल गरे। उनले 2000 बाट 2003 सम्म Bastia को लागि खेले, र 2003 देखि 2005 सम्म लियोन चेल्सी सम्म पुग्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
धेरै महिलाहरु डेटिंग र रिश्ते को चार पर्खालहरु लाई चखने पछि माइकल एसेनन को श्रीमती अकोओसुआ पुणे एस्निन को निधन गर्न को लागी गानियन मूल को ब्रिटिश नागरिक हो।
उनले एक पटक एफसी कोमो लिमिटेड द्वारा आयोजित दिवालियापनमा € 237,000 को लागि एक इटालियन क्लब किन्नुभयो। यो आंकडा € 10,000 शुरुवाती मूल्य भन्दा बढी थियो। तल माइकल एसेनियन र एक उदार देखो मा पत्नी को एक तस्वीर हो।
माइकल एसेनन केटाकेटीहरू उनीहरूको विवाह गर्नुअघि उनीहरूको बाटो थियो भन्ने अर्थ हो। उहाँसँग मिशेल एसेन नामक एक उजुरी पुत्री छ।
उहाँसँग चित्रण गरिएको माइकल एसेनन जर्न नाउँ गरिएको एक ठूलो छोरा पनि छ।
Akosua Puni Essien संग निर्णय गर्न अघि माइकल Essien निम्न सम्बन्ध थियो:
डेला आक्कमनीसँग सम्बन्ध थियो माइकल एसेनन 2003 - 2006 बाट।
न्यिया बुरी एक लोकप्रिय गायनियन अभिनेत्री, जो तमोरदी मा 21st नोभेम्बर 1982 मा पैदा भयो, घाना देखि पहिले विवाह भएको थियो माइकल एसेनन.
नीचे चित्रित कैसी समर 2006 र 2007 को बीच माइकल एसेनियन्स संग सम्बन्ध मा थियो। त्यो पनि मिति छ कार्लटन कोल (2007) र सेलेस्टाइन बेबेयaro (2004 - 2005)।
लुरता मुरती एक ब्रिटिश मोडेल हो जो एक साथ सम्बन्ध मा भएको छ माइकल एसेनन (2006)। लुरुता माइकल एस्सेनको पूर्वको लागि प्रसिद्ध छ।
अन्तमा, लिलि बेइथुथीले चित्रण गरेका थिए माइकल एसेनन 2007 देखि 2008 को बीच
लिला आखिरी महिला महिला माइकल एस्सेन थियो, उनले अन्ततः एक्लोआउ पुणे एसेनियन संग लामो समय सम्म बस्न सहमत भएका थिए जसलाई उनले लामो समय सम्म थाहा पाए।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
माइकल एसेन एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट उठाइयो।
हालका वर्षहरूमा माइकलको विफलताको सामना गर्न असफल भएको कारण जेम्स एसेन, उनको जैविक पिताले आफ्नो छोराको साथ क्रोध गरेका थिए।
नतीजा, बुबाले बताए कि माइकल नाम प्रयोग गर्न छोड्नु पर्छ 'एसेन' उनको उपनामको रूपमा।
"म अहिले एक वर्ष भन्दा बढीको लागि बिरामी भएको छु। यो क्याररीमा (बिरुमम चेल्सा बोर्डको अध्यक्ष) हो जसले मेरो हेरचाह गर्दछ, र माइकलका कुनै पनि बिन्दुमा मेरो नाम सहन जारी राखेन। " उनले एक पटक घाना मुबारक खेलमा भने।
खेलाडीको कथित गैर जिम्मेदार कार्यहरू के कारण हुन सक्छ, जेम्स Essien भन्नुभयो ..., "तिनको आमाले मलाई बिर्सनु भएको थियो कि उनीहरूलाई मेरो पुर्खाको लागि उपलब्ध गराउने रोक्न। म सबै बाहिर जानुहुन्छ कि त्यो मेरो नाम प्रयोग गरी रहन्छ। मैले उसलाई अदालतको अदालतमा तान्नु पर्ने भए तापनि, म यसो गर्नेछु, " उनले थपे।
माइकल एस्सेनले अहिले केहि समयका लागि आफ्नो बुबाको हेरचाह गर्ने उनको कर्तव्यलाई शंका गरेका छन्। तल दिमागको अस्वस्थ तर खुसी अवस्थामा जेम्स एसेन को फोटो हो।
जेम्स एसेनले आफ्नो मेडिकल बिलको लागि सास्ती लिन मिडियामा जानेको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो 2008 देखि 2010 को बीच भयो, एक समय जब माइकल आफ्नो क्यारियर को चोटी मा थियो। माइकल एस्सेन आफैले पनि आफ्नो पिता द्वारा डेबिट दावी गर्न बाहिर आएको छ। पिता र छोरा दुवै दुवै आरोप र प्रति-आरोपहरु, एक पटक घानायन जनसंख्या देखि मिश्रित प्रतिक्रियाहरु लाई आकर्षित गर्न।
सत्यलाई उजागर गर्न प्रयास गर्दा, मानिसहरूले बुबाको गाउँको यात्रा गरे जहाँ जेम्स एसेनले पुष्टि गरे कि उनको पुत्रले उसलाई बेवास्ता गरेको छ। तलको चित्र तिनीहरूले के देख्यो।
यो चेल्सी मिडफिल्डरले सुनेपछि यो बयान जारी गरेर आगो डुबान गर्न खोजे, जसलाई यो पढ्न सकिन्छ: 'मैले मेरो जीवनमा धेरै कठिन चुनौतीहरू सामना गरेको छु तर यो सबै भन्दा कठिन चीज हो जुन मैले झूटो बयानमा मेरो हृदयको रूपमा बिरोध गरेको छु हाल हाल घानायायन मिडियाको एक सानो भागले मेरो पिताद्वारा जान्छ। मैले कहिलेकाहीँ मेरो परिवारलाई सार्वजनिक वा कुनै राम्रो काम गर्दछु जुन कसैलाई के गर्छु, किनकि तपाईले राम्रो गर्नुभयो भने, तपाई केवल भगवानको पहिचानको लागि जानुहुन्छ। मैले मेरो बुबाको लागि के गरेका छन् जब मैले झूटो, भित्ता र अपमानजनक टिप्पणीहरूको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, मैले रोए, किनभने मानिसहरूले सामान्यतया राम्रो काम गर्न अपमानित गर्दैनन्।
'तर मेरो बुबाले मलाई यस्तो भयानक तरिकामा फिर्ता तिर्न निर्णय गर्यो। यसको कारणम दुर्भाग्यवशले मैले के गरेको छ के भन्नुको कारणले गर्दा मैले मेरो परिवारलाई अपमानित गर्न अति धेरै नजिक गएको छु। म निम्न तथ्याङ्कहरू चाहन्छु:
1। मेरो बुबा हाल तीन-बेडरूम घरमा बस्छ (मूर्तिको घरमा होइन) मैले आफ्नै बहिनीलाई आफ्नै पैसाको साथ निर्माण गर्न निर्देशन दिएँ।
2। उसले मासिक भ्रमण गरिसकेको छ र मेरो बहन डायनाले हप्तामा दुई पटक हालै मेरो अर्डरमा नियमित रूपमा पठाउँदछ जुन मैले पठाउदै पैसा र अन्य आवश्यक रकम प्रदान गर्दछु। मेरी आमा, जसलाई उनले धेरै अपमान गरेका छन्, उनको लागि पनि प्रदान गर्दछ।
3। मैले तिनको परिवहनलाई सजिलो बनाउनको लागी एक कार किन्नु र मैले उनको लागि पैसा प्रदान गरेको कार कार ईन्धन गर्न वा यसलाई बिस्तार गर्दा यसलाई मरम्मत गर्न प्रयोग गरिन्छ।
4। जब उनको बीमारी बाहिर आईपुग्यो मैले असेकोमा अस्पतालमा लिन लागे तर उनीहरूले पारंपरिक औषधि चाहन्थे।
'मैले उनको लागि पारंपरिक उपचार गुमाउन पैसा प्रदान गरेको छु। यो केही गर्न आयो र मैले उनको अस्पतालमा लगाइदिने आदेश दिएँ। मेरो परिवारमा विश्वास मैले घर आउन र नियमित आधारमा उसलाई हेर्नको लागि एक नर्सको लागि पनि व्यवस्थित गरेको छु। यी कारणहरू र धेरै अधिक कारणहरूका कारण म सार्वजनिक रूपमा राज्य गर्दिनँ, म कता कता कता कता कता कता छुटिएको छु तर भगवान जान्दछ कि मैले राम्रो तरिकाले एक जना मानिसको हेरचाह गरें जसले मलाई बढायो वा भाग लिइन मेरो अप्ठ्यारोमा र जो 8 अन्य बच्चाहरु छन् जो मद्दत गर्न सक्छन्। '
यो छुटेको शब्दहरू भनिसकेपछि, सम्पूर्ण आरोपहरू प्राकृतिक मृत्युको मृत्यु भयो। घानाहरू र संसारको ठूलो संसार ठूलो थियो।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उपनाम 'बिसन' पछिको कारण
उनको कठिन टकलिंग शैली र असीमित ऊर्जाको कारण, पिचमा एसेनको भौतिक उपस्थितिले उनलाई नाम, 'बिसन' कमाएको छ।
उनको पिचमा उसको शारीरिकताले उनलाई एडगर डेभीड्स र क्लाउड क्युलेले जस्तै अतीतको उत्कृष्ट होल्ड मिडफिल्डर्सको तुलनामा तुलनात्मक रुपमा तुलना गरेको छ।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -Mourinho Bonding
31 अगस्त 2012 मा, एसेनियनले रियल म्याड्रिडसँग एक सिजन-लन्ड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, उसलाई चेल्सीमा आफ्नो पूर्व प्रबन्धकसँग पुन: जोसे माउन्टेन. रियल म्याड्रिडको साथ आफ्नो परिचय प्रवचन सम्मेलन मा मोरेइनो को प्रभावकारी रूप देखि एसेन को रूप मा उल्लेख गरिएको छ "उस्को छोरा" जबकि Essien मा Mourinho को रूप मा उनको "पिताजी"। सिजनको अन्तिम म्याचको दौडान - र म्याड्रिड खेलाडीको रूपमा एस्नियाको अन्तिम खेल - एसेनले म्याड्रिडको लागि दोस्रो गोल गरे, जसमा उनले Mourinho लाई समर्पित गर्यो।
माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एकपटक खतरा लियोन
सौभाग्य देखि, यो टाढा थियो, अगस्त 14, 2005, ल्योन र चेल्सा $ 26 मिलियन सौदा मा Essien को चेल्सी को हस्तांतरण को लागि सम्झौता मा सहमत भए। यसले अंग्रेजी फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा लामो-चलिरहेको ट्राफिक सागेगेको एक समाप्ति गर्यो। एसेन लन्डन क्लबको लागि एक महत्वपूर्ण खेलाडी बनेको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो माइकल Essien बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।